Cayaartoy Da'yar Afrikaan ah oo loo gudbiyay Laos - BBC Somali
Cayaartoy Da'yar Afrikaan ah oo loo gudbiyay Laos
Cayaaryahanno kubadda cagta oo ilaa 14 jiro ah ayaa si qalad ah looga bixiyaa Africa oo la geeyaa Aasiya, iyagoo lagu qasbo in ay xoog ugu ku saxiixaan qandaraasyo, ayay BBC ogaatay.
Lix dhalinyaro ah oo aan qaangaarin ayaa wali la jooga wadanka Laos ee Champasak United kadib markii ay kooxda galbeedka africa ka kaxaysatay ilaa 23 cayaartoyd oo da' yar, iyadoo la geeyay akadeemiyad aan la diiwaangalin bishii February, baaritaan BBC ah ayaa lagu ogaaday.
Shuruucda Fifa ayaa mamnuucaya in cayaartoyda hadii ay ka yar yihiin 18 sano loo kaxayn karo nadi dibedda ah. Naadiga oo fadhigiisu yahay magaalada koonfureed ee Pakse ayaa beeninaya wax qalad ah in uu sameeyay.
"Fifa ayaa xiriir la samaysay dhowr hay'adood oo xubin ka ah si ay u hesho xogta oo loo baaro xaaladdan loona ilaaliyo dhalinyarada da'da yar, ayuu yiri afhayeen u hadlay Fifa oo BBC waraysatay.
Waxaa la sheegay in kooxda Champasak United, oo ah naadi dhowaan la sameeyay oo qaybaha sare ee magaalada Laos uu qorshaynayo in uu mustaqbalka ka faa'iido sii iibinta cayaartoyda.
Mid ka mid ah cayaartoyda yar yar ee Africa ayaa sharaxay waqtigii uu la joogay naadiga in ay ula mid ahay 'sida adoon loo shaqeeyo'
"Way adagta tahay in lagu noolaado meel aan daaqad lahayn", ayuu BBC u sheegay mid ka mid ah cayaartoyda.
Waxaa si cad loo jabiyay shuruucda guddiga maamula kubadda cagta adduunka, naadiga ayaa keensaday cayaartoy dibedda laga keenay oo da'doodu u dhaxaayso 14 iyo 15 oo ka cayaara naadiyada dalka xilli cayaareedlkan.
Mid ka mid ah 14-jirada, oo u dhashay Liberia Kesselly Kamara, oo goolal ka dhaliya cayaaraha ugu sareeya ee naadiyada ayaa sheegay in lagu qasbay saxiixa heshiis lix sano ah ka hor inta uusan u cayaarin kooxaha naadiyada sare.
Qandaraaska la siiyay ayaa loogu ballanqaaday mushaar iyo meel uu dago balse Kamara ayaa sheegay in waligii aan lacag la sinin, uuna seexan jiray shamiitada garoonka naadiga si la mid ah cayaartoyda kale ee la safriyay.
Kamara waxaa loo ballan qaaday in bishii la siiyo $200.
Dhamaan dhalinyarada safartay si ay ugu biiraan "Akadeemiyadda kubadda cagta Africa ee IDSEA Champasak Asia" ayaa sidaa yeelay kadib markii uu ku casuumay cayaartoy hore uga tirsanaa qaranka Liberia Alex Karmo oo mar kabtan u noqday kooxdan.
"waxaa uu ahaa akadeemi xun oo waligii aan sharci la siinin," ayuu yiri weriye u dhashay Liberia.
Kadib cadaadis hordhac ah oo ka yimid Fifa iyo guddiga cayaartoyda caalamiga ah ee FIFPro, Champasak ayaa fasaxday ilaa 17 dhalinyaro dhowr iyo toban jirro ah, waxaa ka mid ahaa Kamara, sadex bilood ka hor. Balse, lix dhalinyaro da' yar ah ayaa iskood u joogay.
FIFPro waxay sheegay in lixda hartay ay saxiixeen qandaraasyo uu u soo bandhigay Karmo, oo isku sheegay in uu yahay maamulaha cayaartoyda africa ka timaada ee jooga naadiga Champasak".
"Maanta dhaqdhaqaaqyo dambiileyaal ayaa halis ku ah kubadda cagta adduunka iyo cayaartoda dhalinyarada ah, sidaa darteed waa muhiim in la wada shaqeeyo. Fifa waxaa looga baahan yahay in ay howshan gacanta ku qabato." ayuu yiri Jean-Claude Mbvounim oo u ololeeya ka hortagga safrinta cayaartoyda da'da yar.
Fifa ma awooddaa in ay joojiso safrinta caruurta?
Waxay kuwan u muuqdaan in ay ogolaanayaa Champasak in aysan caruurta lacag siinin, iyadoo sidoo kalena dalbanaya in xaaladaha aan la aqbali karin ay tahay in wax laga qabto ka hor inta aan la ogolaanin in caruurta ay safraan.
Karmo wuxuu leeyahay cayaartoyd waxaa cunto la siiyaa sadex jeer maalintii bil kastana lacag baa la siiyaa.
"mushaar rasmi ah ma siinno dhalinyaro ee waxaan siinnaa qandaraas u ogolaanaya in abaalmarin la siiyo", ayaa u sheegay BBC, Mr Khieulavong oo ah maamulaha naadiga.
Khieulavong iyo Karmo midkoodna ma beeninayo joogitaanka caruurta ee akadeemiyadda, inkastoo Karmo uu leeyahay hal kaliya ayaa jooga oo ah 16 jir ka mid Guinea.
BBC ayaa fahamsan in shan kale oo caruur ah ay ku sugan yihiin naadiga kuwaas oo ka yimid dalka Liberia.
Waxaa kaloo jooga sideed cayaartoy sare (Lix Liberian ah, mid Ghana ka yimid iyo Sierra Leone.), dhamaantood waxay ku nool yihiin xaalado nololeed oo lagu tilmaamay "wax laga naxo oo la necbaysto.